သငျသညျဘုရားသခငျ၏ဆုကြေးဇူးကိုသိလျှင် | Apg29
သငျသညျယရှေုကိုသင့်ရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားတဲ့အခါ, သငျသညျဘုရားသခငျ၏ကလေးတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်သင်၏နှလုံးထဲသို့ဆွဲယူနှငျ့သငျသညျဘုရားသခငျ၏မတ်ေတာတျောနှငျ့ပွညျ့စုံနေကြသည်။ ယရှေုသညျအသကျရှငျရေနှင့်အတူကနှိုင်းယှဉ်။
ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကိုယရှေုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာငါတို့အပြစ်တရားပင်နယ်တီကို ယူ. ဘုရားသခင်၏သားတော်အားဖြင့်ငါတို့အားထင်ရှားခဲ့သည်။ ဘုရားသခငျသညျပဏာမခြေလှမ်းကို ယူ. ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်လွှတ်ခြင်းကိုဆက်ကပ်။ ကျနော်တို့ကစင်ကြယ်သောသြတ္တပ္ပစိတ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့သညျယရှေုကိုယုံကြည်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူ့မေတ္တာကိုအတည်ပြုရန်လိုသည်။
"ယေရှုကလည်း, ထိုမိန်းမငယ်အားကဆိုပါတယ်။ ဒီရေကိုသောက်သူကိုလူတိုင်းကနောက်တဖန်ရေငတ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဒါပေမယ့်သူ့ကိုငါရေငတ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ပေးရမည်ရေကိုသောက်သောသူမည်သည်ကား, ငါသူ့ကိုအတွက်တစ်ဦးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ကိုပေးရမည်သောရေမရှိရင်။ ထာဝရအသက်ကိုရမှတက်နေရင်းရေ။ " ဖြစ်မှု။ 4: 13-14
ကျမ်းစာထဲမှာစကားသည်လူဦးကရေးသား, ဒါပေမဲ့သူတို့ဘုရားသခင်ကမှုတ်သွင်းဖြစ်ကြောင်းစကားလုံးများကိုဖြစ်ကြ၏။ ထိုမိန်းမသည်ပထမဦးဆုံးမှာမဟုတ်ပြုသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်သူမ၏စကားပြောခဲ့သူ။ သငျသညျကမျြးစာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုယူသောအခါ, သငျသညျဘုရားသခငျ, ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဲ့အစိတ်အပိုင်းယူသည့်အခါနားလည်ပါသည်။ နှင့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုသင်အတွင်းအရင်းအမြစ်များရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းစွာနဲ့ဘယ်တော့မှသူတစ်ဦးက source ကိုခြောက်သွေ့တဲ့လှစ်ထားသည်။ ထိုအခါသင်သည်ထိုဤနေရာတွင်နှင့်ကျော်ကျော်မကြည့်ကြပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်အတွင်းအသက်တာ၏ဆုကြေးဇူးကိုရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထဲ၌ကျိန်းဝပ်ရန်လိုသည်။ သူသည်သင်တို့ခရစ်ယာန်အသက်တာကိုအသက်ရှင်နေထိုင်ကူညီပေးဖို့လိုသည်။ ဒါဟာအံ့သြစရာပါပဲ။ အသက်, ငြိမ်းချမ်းရေး, မေတ္တာနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတစ်ဦးကလက်ဆောင်တစ်ခု။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယရှေုကမိမိသေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့အားအဘို့ပြုတော်မူပြီအဘယ်အရာကိုအားလုံး။ ဤသည်, ငါ့မိတ်ဆွေတစ်ကြောင့်ဒီလောကကျိုးပဲ့ရေတွင်း outclasses ။ သငျသညျဘုရားသခငျ၏ဆုကြေးဇူးကိုမြည်းစမ်းရသည့်အခါသိန်က၎င်း၏အယူခံရှုံး။
"ယေရှုကလည်း, ထိုမိန်းမငယ်အား said: သင်ညျဘုရားသခငျ၏ဆုကြေးဇူးကိုအဘယ်သူသည်သင့်ကိုမှမိန့်တော်မူသည်အသိလျှင်သောက်ရန်ငါ့ကိုပေးပါ '' သင်ကသူ့ကိုမေးမွနျးခဲ့ကြပေသည်, သူသည်သင်တို့ကိုရေနထေိုငျပေးပြီလိမ့်မယ်။ " ဖြစ်မှု။ 4:10
" ... ဒါဆိုသင်က 'သူ့ကိုမေးလျှင်ရှိသည်ဟုမယ်လို့ - အိပ်ရာနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်သောရေ
" ... သူသည်လည်းသင်တို့ကိုရေနထေိုငျပေးပြီလိမ့်မယ်။ " - ယရှေုသညျသငျသညျသူ့ကိုမေးသောအခါ, သငျသညျဘဝပေးသည်။
သငျသညျလုံးဝအရာအားလုံးကိုနားလည်ကြဘူး, သင်မူကားလုံခြုံစိတ်ချစွာဘုရားသခငျသညျသာကောင်းသောလက်ဆောင်များပေးသိနိုင်ပါသည်။ ယနေ့ရေနေထိုင်ခြင်း၏မှတ်ချက်ကိုယူပါ။ ဒါဟာသင်သန့်စင်ခြင်းနှင့်သင်အသစ်များခွန်အားနှင့်ဘဝကိုပေးသည်။ ကမျြးစာကိုဖွင့်ပါနဲ့ယေရှုနှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသက်တာအကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ပါ။